सुशान्तको निधनको ३ महिना पछि ‘इन्स्टा स्टोरी’ भाइरल, के लेखेका थिए ? - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
सुशान्तको निधनको ३ महिना पछि ‘इन्स्टा स्टोरी’ भाइरल, के लेखेका थिए ?
सुशान्तको निधन भएको लगभग ३ महिना पुरा भइसकेको छ । उनको अप्रत्यासित निधनले विश्वभर रहेका उनका फ्यानहरु आश्चर्यचकित बनेका छन् भने सीबीआई उनको मृत्युको प्रकरणको बारेमा बुझ्न लागिपरेका छन् । भारतीय प्रहरीले अनुसन्धान पनि जारी राखेको छ।
यहीबीचमा सुशान्तको अन्तिम इन्स्टाग्राम स्टोरीको स्कृनसर्ट भाइरल भइरहेको छ। सुशान्तले आफ्नो अन्तिम इन्स्टा स्टोरीमा दिशा आलियानका लागि लेखेका थिए। इन्स्टा स्टोरीमा सुशान्तले दिशालाई श्रद्धान्जली दिएका छन्।
क्याप्सनमा उनले लेखेका छन्, ‘यो एकदमै दुखदायी खबर हो। उनको परिवार र साथीहरुलाई मेरो सम्वेदना, उनको आत्माले शान्ति पाओस्। हार्दिक श्रद्धान्जली।
सुशान्तको निधन १४ जुनमा भएको थियो। उनको निधनभन्दा पहिले ८ जुनमा दिशा सालियानले बिल्डिंको १४औं तलाबाट हाम फालेर आ त्मह त्या गरेकी थिइन्। भारतीय सञ्चार माध्यमकाअनुसार दिशाको मृत्युपछि सुशान्त पनि तनावमा आएका थिए। दिशाको निधनको खबरले सुशान्त बेहोस भएका थिए।